Ivo vanoona iyo myocardial infarction yekutenda kune yako Apple Watch | Ndinobva mac
Ivo vanoona iyo myocardial infarction nekutenda kune yako Apple Watch
Kune vatove vazhinji vashandisi vane chikwereti chehupenyu hwedu kune vedu Apple Watch. Pasina kupokana, ma sensors ayo anotinyevera nezve zvisina kufanira mune edu pulsations, oxygen mazinga uye ECG anobatsira anopfuura mumwe chete mushandisi ane matambudziko ehutano mazuva ese.
Uye nhasi tinowana imwe nyaya. Mumwe mukadzi anobva kuMichigan aive neyambiro kubva kuApple Watch yake yekuti kurova kwemoyo kwaive kwakanyanya. ndanga ndine 169 kurova, ndiri pazororo. Akaenda kuimba yekukurumidzira uye akange atove nekachechecheche myocardial infarction. Mazuva mashoma gare gare, akavhiyiwa pamutsipa wemwoyo kugadzirisa dambudziko uye kudzivirira mutsva wemwoyo. Bravo.
Musi waApril 22, Diane feenstra, mugari weNorton Shores, Michigan, akaona chiziviso paApple Watch yake kuti aive nemoyo wakakwira panguva iyoyo. Aive nemoyo wekurova ka 169 kurova paminiti, kunyangwe hazvo kurovedza kukuru kwaakaita zuva iri kwaive kukwira nhanho gumi nembiri.
Achinetsekana, akadana murume wake, uyo akamutumira kuna chiremba wake. Kushanya kuchipatara chipatara mukamuri kwakaratidza kuti akatambura a kumira kurova kwemoyo zvishoma, uye akange achingoonekwa chete neyambiro pawachi yake.
Iyo ER yakamupa iye aspirin ndokumutumira kuMeijer Moyo kune imwezve bvunzo yemoyo. Kutevera zvawanikwa, zvakatemwa kuti aive ne kuvharika mutsinga, iyo yakagadziriswa nekuisa stent mune akati kuvhiringidza.
Pasina kupokana, iyo Apple Watch ndicho chikonzero chikuru Feenstra yakakumbira rubatsiro. Aingova nemumwe chete zvishoma indisposition, pasina kumbofunga kuti inogona kunge iri myocardial infarction. Saka dai asina kuenda kuEER paakaona kurova kwemoyo wake kuchikwira, kukuvara kwemoyo wake kungadai kusingawanikwe munguva, uye angangove akazove neimwezve, yakanyanya kurwadza kwemoyo gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ivo vanoona iyo myocardial infarction nekutenda kune yako Apple Watch
OS X Shumba uye Mountain Shumba zvino inogona kutorwa mahara
Isu takaedza iyo Tado Smart AC Kudzora V3 +. Chengetedza yako AC medainte HomeKit